Maminitsi makumi matatu ekudzidzira anovhura chinotevera Chiitiko chinetso cheApple Watch | Ndinobva mac
PaZuva rePasi, yatove neChitsva chiitiko chinetso kune vashandisi veApple Watch, mune iyi kesi ita maminetsi makumi matatu ekudzidzisa. Panguva imwechete iyi Apple yaive yatove nezvimwe zvezvitoro zvakashongedzwa neruvara rwegreen kupemberera zuva rino repasi.
Mupfungwa iyi, isu tinofanirwa kuratidza kufarira kwaApple mukusimudzira kwese kwese zviito zvezviwanikwa uye mazuva mashoma apfuura takaona kuti zvakaziviswa sei iyo 100% yekushanda kwayo kwekambani kunoitwa nesimba rinowedzerwazve uye izvi zviri kuenderera mberi muzvivakwa zvese zvitsva. Ikozvino kupemberera Zuva rePasi kambani ichavhura chinetso chitsva cheApple Watch, yakafanana neiyo yatakaona gore rapfuura.
Nehafu yeawa yekurovedza muviri tichakwanisa kuvhura chiitiko muiyo Chiitiko app uye zvimwe zvinamirwa yakafanana neiya yakapihwa gore rapfuura (mufananidzo wezasi). Mune ino kesi, maseki anokwanisa kutumirwa muMessage application uye zvinopfuura kuita kweApple, iko kubudirira kwemushandisi, uyo achaita chiitiko chemuviri kwehafu yeawa. Aya marudzi e "zvinetswa" anoshanda sekurudziro kune avo vasingarovedze zvakawandisa uye pasina mubvunzo inzira yakanaka kwazvo yekubatirira pamitambo.
Kana iwe uine Apple Watch, gara wakatarwa Svondo inotevera, Kubvumbi 22, nekuti ndipo patichafanirwa kuita dambudziko re: ipa inopfuura maminitsi makumi matatu yekudzidzira kunze. Kana tikapedza, Apple ichatipa iyo kubudirira uye akasiyana akasarudzika mapepa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maminitsi makumi matatu ekudzidzira anovhura chinotevera Chiitiko chinetso cheApple Watch
Svondo Kubvumbi 22, gore ripi?
Shock absorber yeiyo HomePod; ndakuoneka kudengenyeka